तपाईं कहिलै झगडा गर्नुहुन्न ? होला नि ब्रेकअप
जो पति पत्नीबीच झगडा भइरहन्छ, त्यस्ता जोडीको सम्बन्ध झन मजबुत हुने गर्दछ। तपाईलाई लाग्न सक्छ, झगडाले पति पत्नीबीचको सम्बन्धमा झन दरार बलाउँला ? तर त्यसो हैन्। पति पत्नीबीच जति झगडा हुन्छ, त्यतिधेरै सम्बन्ध पनि मजबुत हुने गर्दछ। यो कुरा अध्ययनले देखाएको छ।
सधै प्रेम गरिरहने भन्दा एक अर्काबीच बाझिरहने जोडी एकअर्काबीच धेरै नजिक हुने उक्त अध्ययनले देखाएको छ। हुन त आफ्नो पार्टनरलाई सताइरहनु गलत कुरा हो। तर अध्ययनका अनुसार तपाईले जो सँग प्रेम गर्नुहुन्छ, उसँग झगडा हुँदा दुबैको सम्बन्धका लागि फाइदाजनक हुने गर्दछ। तर तपाईले यो कुराको भने ख्याल गर्न जरुरी छ की सबै झगडा हल्लाफुल्का अन्दाजमा हुन जरुरी छ।
जस्तै तपाईको पार्टनरले गीत गाइरहेको छ भने त्यसलाई गलत भन्ने तथा मजाक उडान सक्नुहुन्छ। यस्तो मस्ती मजाकबाट तपाईको सम्बन्ध मजबुत हुने गर्दछ।
अध्ययनका अनुसार जो जोडीले एक अर्काबीच कुनै न कुनै कुरालाई लिएर झगडा गरिरहन्छन् र एक अर्काको मजाक उडाउने गर्दछन् त्यस्ता जोडीको प्रेम झन गाडा हुने गर्दछ। यस्तो यस कारण हुने गर्दछ, जुन समय पार्टनरले चिढाएको समयमा एक अर्काको हाउ भाउ राम्रोसँग देख्न सक्छन्। जसलाई देखेर उनको पार्टनरसँग प्रेम झन जाग्ने गर्दछ।
यो अध्ययन अकेरिकाको ले गरेको थियो। अध्ययनका बारेमा बताउँदै मनोचिकित्सक क्रिस्टीन एल्विनले भनेका छन् की पार्टनरलाई चिडाउने कयौँ तरिका हुने गर्दछन्। तर यो स्वभाविक हुन आवश्यक छ।
क्रिस्टीन एल्विनले भने, कुनै पनि सम्बन्धका लागि सबैभन्दा राम्रो पार्टनरसँग हाँसी मजाक गर्नु हुन्छ। यो आवश्यक छैन की तपाईले हरेक दिन उनलाई चिडाउनु पर्छ। तर अलग अलग तरिकाले उनीसँग मजाक गर्नु पर्दछ। यसरी हाँस्दा हाँस्दा दुबैको तनाव पनि कम हुने गर्दछ।